PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-12-05 - Asizikhetheli imuva kodwa sin­ga­likhetha ikusasa
Asizikhetheli imuva kodwa sin­ga­likhetha ikusasa
Eyethu Baywatch - 2018-12-05 - LETTERS • IZINCWADI -
NAMUHLA ngiy­athanda ukuthi sizinike isikhathi soku­ca­banga ukuthi, ingaba njani i-South Africa ejab­ulele ukukhu­l­ulwa kuband­lu­l­ulo, yathatha am­ath­uba enikezwe wona ukuthuthuk­isa izwe nez­impilo zayo?
Nakuba kungeke kwen­zeke konke ngokushe­sha, kodwa umehluko ungaba mkhulu ngendlela emangazayo.
Lokho futhi kungeth­ula umth­walo kuhu­lu­meni, ngoba zin­gan­ci­pha izandla ezikhangezayo, kwande abantu abaseben­zayo, bakhokhe in­tela kuhu­lu­meni, bon­dle ba­fundise imin­deni yabo, bakhusele nekusasa labo, bathuthukise um­notho wezwe.
Kulesi sizukul­wane sana­muhla es­izalwe seku­zophela uband­lu­l­ulo, naleso es­izalwe sekuphele uband­lu­l­ulo, mn­gakanani umehluko abaz­imisele ukuwenza ez­impil­weni zabo kan­jalo nasezweni labo?
Yebo iz­into eziningi kubo zize kalula, kodwa bazok­wen­zan­jani nga­lokho?
Ba­zothatha lezi zi­bonelelo zikahu­lu­meni baz­i­jik­i­jele ebusweni bukahu­lu­meni futhi?
Yilokho abak­wen­zayo uma ben­ga­funi ukuthatha am­ath­uba bawaseben­zise, ba­jike bathuke ngawo uhu­lu­meni obakhele izindlu zamah­hala, wa­banikeza imali yez­i­bonelelo, nyanga zonke nokunye.
Ngiy­athanda ke­sib­heke ukuthi uma impilo yomuntu we­si­fazane noma we­sil­isa ingam­beki es­imweni sokuthi ashade noma ashadelwe, kubalu­lake ngani ukuthi bakip­ite? Mh­lawumbe ngiy­ilenhlobo en­dala, engazazi iz­into za­manje.
Ukushada nokushadelwa kun­gukuzikhethela ko­muntu ley­ompilo, nokuh­lal­isana kun­gukuzikhethela futhi.
Uma ukuh­lal­isana kuy­into enhle, kushadel­wani pho?
Yikuphi okuyikhona oku­lungile? Lend­aba inokuthi ukukholwa nokuk­holelwa kwethu kuthini. Ithini imiyalelo noma iz­ifundo ezisithola ebhay­ib­he­lini nga­lokhu? Ngok­we­siko ke khona sifunda noma sithola ziphi iziyalo nez­iqondiso?
Ngokokukholwa, kunez­impik­iswano nga­lokhu, ngoba abe­fun­disi ba­maRoma be­bephik­isana nokushadelwa, nabesi­fazane babo abanye, bakhethe ukuba nga­man­dela.
Kodwa futhi imin­deni ya­bantu abashadile ikhona kulelibandla.
Omunye uzothi ku­sizani ukushada ngoba amadoda es­ithan­dana nawo yi­lawa aganiwe kodwa siyawathola?Kan­jalo na­makhosikazi ashadile siyawathola, sithan­dana nawo?
Yiziphi iz­ifundo eza­khayo ezitho­lakala kulezi zimpilo, ey­omshado nekamahlal­isana?
Umshado nokuh­lal­isana yiz­impilo lezo abantu abazikhethela zona. Kan­jalo futhi nokuz­ih­lalela nje udle emgqonyeni, noma emdib­ini kun­gukuzikhethela.
NONTOBEKO MZ­IMELA Ng­welezana
We don’t choose our past